Momba an'i Wasabi-NANTONG CHITSURU FOODS CO., LTD.
Fa maninona no mora vidy ilay vovoka Wasabi 100% eny an-tsena?
Misy fepetra roa: Voalohany, ampidirin'ny mpamatsy ao aminy ny vodin-katsaka; Faharoa, vovon-tsavony wasabi io.
Inona no atao hoe wasabi?
Ny tena wasabi dia vita avy amin'ny rhizome (toy ny tahon-javamaniry maniry ambanin'ny tany izay antenainao hahitana faka) an'ny Wasabia japonica. Ny spiciness madio azy dia avy amin'ny allyl isothiocyanate fa tsy capsaicin-dipoavatra.
Avy aiza ny wasabi?
Ny tena wasabi dia avy amin'ny fihazakazak'ilay fotony toa fotony (antsoina hoe rhizome) an'ny zavamaniry maharitra fahizay any Japon, Wasabia japonica. Mitovy be amin'ny fakany horseradish miloko maitso izy io, ary mizara mombamomba ny tsirony koa izy roa. Izany dia satria wasabi dia mpikambana ao amin'ny fianakaviana Brassica mitovy amin'ny horseradish sy mustard - ny antony lehibe mahatonga ny fampiasana vovon-tsoavaly ho solony miasa tsara.
Sarotra ve ny maniry i wasabi?
Raha ny marina dia nantsoin'ny BBC hoe "zavamaniry sarotra indrindra maniry hitombo" izy io ary ny fanaovana fahadisoana dia mety ho lafo be amin'ireo tantsaha wasabi. Ny voa mihitsy dia efa ho iray dolara avy, ary matetika tsy mitsimoka. Ny zavamaniry dia somary mifidy ny tontolo iainany, ary raha iharan'ny hamandoana be loatra, kely loatra ny rano, na ireo otrikaina diso, dia halazo izy ary ho faty.
Masiaka ve i wasabi?
Raha efa nanana wasabi tena izy ianao dia fantatrao fa masiaka izy io, fa tsy mafana loatra. Izy io dia manana fangaro / tsiro ahitra / fofona toy ny zavamaniry izay nofaritan'ny Art of Eating ho manana fofona "vaovao, maintso, mamy, matavy, manitra, ary pickl."
Ny ravin'ny zavamaniry wasabi koa azo fihinana sa tsia?
Na dia manana ny tsirony mifantoka indrindra aza ny rhizome wasabi dia azo hanina ilay zavamaniry iray manontolo. Ilay zavamaniry dia tsara tarehy, maniry eo amin'ny roa metatra ny halavany misy tahony lava sy malefaka izay mitifitra ambonin'ny tany. Ny ravina miendrika fo dia lehibe tahaka ny lovia fisakafoanana kely ary fanampiny miampy salady na lovia endasina ao Japon.